Himalaya Dainik » कसले भन्छ पशुको ज्ञान हुँदैन ?
कसले भन्छ पशुको ज्ञान हुँदैन ?
अहिले कोरोना भाइ रसका कारण आधा विश्व लकडाउनमा छ । अब विस्तारै केही देशहरुले लकडाउन खुकुलो बनाउँदैछन् । लकडाउनका कारण जंगली जनवारहरु पनि शहरमा पस्न थालेका छन् । यस्ता भिडियो तस्विरहरु पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा खुब भाइरल भइरहेका छन् ।
यस्तै एक दृश्य अमेरिकाबाट आएको छ । यहाँको कोलोराडोमा एक हरिणले गरेको चलाखीलाई लिएर सबै चकित भएका हुन् । उसले गरेको कार्य हेर्दा विश्वमा नै पशुहरुको ज्ञान हुँदैन भन्ने भ्रम तोडिएको छ । लोरी जोन्स एउटा सानो पसलमा काम गर्छन् । उनले उपहारलगायत विभिन्न सामानहरु बेच्ने गर्छन् ।
बाहिर उभिएको हरिण एकछिनपछि पसल भित्र पस्यो । उ भित्र गएर घुमिरहेकी थिई मानौं कि उक्त पसलमा उनी ग्राहकजस्तो गरी आएकी थिइन् । यस्तो लाग्थ्यो कि ति आमा हरिण पसलमा सामानहरु हेर्दै थिइन् । जोन्सले भने, ‘यो देख्दा मलाई खुशी लागेको थियो ।’ हरिणले चश्मा र चिप्स हेर्दै थिइन् । त्यसबेला जोन्स मन खोलेर हाँस्दै थिए ।
यो हरिण जोन्सका लागि अपरिचित थिएन् । उनी त्यस परिवारको एक सदस्यजस्ता थिए । यस पार्कमा वस्नेहरुका लागि यसरी हरिण देखा पर्नु कुनै नयाँ विषय थिएन । तर उनीहरु कहिलेकाँही मैदानको छेउछाउमा चरिरहेका हुन्थे ।
जोन्सले फेरि सबैलाई खानेकुरा दिएर फर्काए । यी साहुजीले यो सबै बताएर ती हरिणहरुका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । पोष्ट गरेको केही समयमा नै तस्वीर भाइरल सेयर भइरहेका छन् । अधिकांशले क्याप्सन लेखेका छन् कसले भन्छ पशुमा ज्ञान हुँदैन ? यी हरिण आमाबाट जान्नुहोस् । तपाईलाईपनि यो सत्य घटना रोचक लागेमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ । सबै प्राणिको सम्मान गरौँ । जय सृष्टि !